अविरल वर्षाले देशैभरको जनजीवन प्रभावित बनाएको छ । वर्षायाम सुरु हुनासाथ हरेक दिन त्रासदीपूर्ण जीवन व्यतित गर्न बाध्य तराईवासीहरुलाई यस वर्ष पनि त्रासमय दिनचर्या बिताउनु परेको छ । सरकारले ठोस कदम नचाल्दा र दीर्घकालीन समाधानको उपाय नल्याउँदा वर्षेनी तराईबासीहरुको बिचल्ली हुने गरेको छ ।
यस वर्षको बर्षायाम सुरु हुनासाथै तराई मात्रै होइन पहाडी क्षेत्रमा पनि बाढीले केन्द्रविन्दू बनायो । लगातार तीन दिनदेखि परेको वर्षासँगै बुधबार मध्यरातिबाट भक्तपुरका घरघरमा बाढीले ढोका धकधक्याउन पुग्यो । भुइँतलाका सामानहरु चुर्लुम्म डुबे । रातभर मानिसहरु जाग्राम बसे । बिहान अबेलादेखि सरकारले उद्धार कार्य थाल्यो ।
उद्धारकार्यमा लागेका नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा रेडक्रसको टोलीले झण्डै डेढसय मानिसहरुलाई प्रभावित क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारे होलान् । सडक तथा बस्तीहरुमा ४ फिटसम्म पानी जमेको थियो । अरनिको राजमार्ग दिनभर अवरुद्ध बन्यो । वारपार जलमग्न थियो । वर्षासँगै खोलामा आएको बाढीले भक्तपुर चुर्लुम्म डुब्यो । वर्षासँगै आएको पहिरोमा परी भक्तपुरकै चाँगुनारायणमा एकै परिवारका तीन जनाले ज्यान गुमाए । पहिरोले टहरो पूर्दा उनीहरुको ज्यान गएको प्रहरीले बताएकाे छ ।
बाढीले भक्तपुर मात्रै हाेइन ललितपुर, काठमाडाैंका केही भू-भाग, भक्तपुरसँग सीमाना जाेडिएकाे काभ्रेकाे बनेपा पनि डुबानमा परेकाे छ । बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा धोबिखोलामा अाएकाे बाढीका कारण त्यस वरपरका क्षेत्र डुबानमा परे ।
यस वर्ष वर्षा सुरु हुनासाथै भक्तपुर डुबानमा पर्‍यो । बाढीका कारण ५० घर टहरामा आंशिक क्षति भएको छ भने ५०० परिवार विस्थापित भएका छन् । यस्तै घरमा पानी पसेका कारण अन्नबाली लगायतका जिन्सी सामानमा क्षति पुगेको छ ।
हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीका कारण भक्तपुरस्थित मध्यपुरथिमि नगरपालिका क्षेत्रका कमेरोटार, राधेराधे, निकोसेरा, दुवाकोट, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, जगाती र लिवाली आसपासका सयौं घर डुबानमा परे । त्यस्तै खसाङखुसुङ र मनहरा खोला आपपासका थुप्रै बस्तीहरु डुबानमा परे ।
अव्यवस्थित मानव वस्ती विकास हुनुले खोलाको आकार सानो हुन गई वस्ती नै डुबानमा परेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘खोला बग्ने क्षेत्रमा घरैघर छ, नगरपालिकामा नक्सा पास नै नगरेर मनपरी गरिएको छ’ उनले थपे, व्यक्तिगत स्वार्थले खोलाहरूलाई अतिक्रमण गर्दा आज यो स्थिति सिर्जना भयो ।’
वर्षाको समयमा पर्याप्त पानी निकास हुने ठाउँ नहुँदा, भारतीय बाँधका कारण अधिकांश तराई भूभाग डुबानमा पर्ने गर्दथे । गत वर्ष मात्रै जलमग्न तराईमा शव गाड्ने ठाउँ नपाएर खोलामै बगाइएको घटना अझै ताजै छ । हजारौं मानिस घरवारविहीन बने, लाखौ हेक्टर जग्गा जमिन मरुभूमि बने, करौडौको धनमाल क्षति भयो । अब त अति भो सरकारले केही गर्ला, बाढी पीडित लक्षित केही तदारुकता देखाउला भन्ने ठूलो आशा थियो जनतामा तर विपक्षी हुँदा सरकारमा बसेकालाई कटाक्षको ओइरो, सरकारमा गयो एउटा कानले सुन्यो अर्काे कानले उडायो गरेका छन् ।
यस वर्ष बाढी र पहिरोको समस्या सुरु हुन लागिसकेको छ । यस वर्ष पनि बाढीले तराईका केही भूभागहरुसँग भेटघाट गरिसकेको छ । वर्षायामको सुरुवाती चरणमा बाढीको यस्तो चर्चा छ, समस्या समाधानका लागि केही पहल सुरु गरिएको छैन, झन् वर्षाको मध्यतिर के कस्तो दुर्दर्शा होला भन्ने चिन्ता एकातिर छ ।
सरकारको ध्यान राहत वितरणमा जान्छ तर समस्याको दिर्घकालीन समाधानमा भने कहिल्यै गएन । घटना घटिसकेपछि मात्र गोहीको आँसु झारेर हुँदैन । जुन सरकारको पालामा बाढीको समस्या हल गर्ने आश्वासन बाहेक खासै बाढी पीडितले अरु केही पनि पाउन सकेनन् । डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सडक कार्यालय, नगरपालिका, प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय लगायत सबैले समन्वय गरेर काम गर्न जरूरी छ ।
जे हुन थियो भइसक्यो भनेर अबका दिनका लागि सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो । सरकारले पनि तदारुकता देखाउनु पर्ने हो । तर विपदको बेलामा मात्रै केही तातेको जस्तो लाग्ने सरकार वर्षाको अन्त्यसँगै सेलाएर जान्छ । जनतालाई सास्ती भएको बेला राज्य भएको अनुभूती गराउनुपर्ने हो । तर सक्दैन सरकारले उपस्थिती देखाउन । ‘घटनाप्रति हामी दुःखी छौं, हामी प्रयासरत छौ’ भन्ने सधैको एउटै भाषा प्रयोग गरेर जनताको समस्यालाई घाममा सुकाइदिन्छ सरकार । यो दुर्भाग्य मान्नुपर्छ ।
बर्षेनी यसरी जनता दुःखी हुँदा पनि नदेख्ने सरकार कस्तो आँखा तिम्रो ?, जनता विचल्लीमा परेको नदेख्ने कस्तो आँखा तिम्रो ?, जनताको पीडा महसुस नगर्ने कस्तो हृदय तिम्रो ? देश बचाउ, जनता हँसाउ भनी जनताले भोट हालेर तिमीलाई सत्तामा पठाएका हुन् । आज जनताको आवाज किन तिम्रो कानसम्म पुग्न सकेन ? कति कठोर बन्यौ सरकार तिमी ? यो बाढीले धनी गरिब भन्दैन, आज जनताको घरमा पस्ने बाढी भोलि सबैको घरमा पनि पस्न सक्छ । चेतना भया ।